COVID-19 Health Advisory Announcement - New Level Red
Letter No: EM (LG) 034/2020
I’m sure most of you are aware that as of last night - 20th September - the Yangon Regional Government has heightened precaution measures related to COVID-19. In light of this latest development, we are moving our precaution measures to the highest CODE RED level.
With the guidance from the Government and our Covid Command Center, we have decided to take the following actions to better protect our community. This takes effect Tuesday, 22nd September, at 8:00 am.
New Level Code Red
Government directive to stay home
No visitors may enter the Estate. This includes club members who live outside of the Estate.
Only residents may move in and out of the estate for essential travel.
Access to household staff living outside the Estate such as helpers and care givers will not be allowed. Please make sure they are living in.
Drivers will not be allowed to enter the Estate. You will need to meet them at the main gate (we will continue the estate buggy service and you may also rentabuggy from the golf club)
Essential services such as pre-determined food suppliers, medical / clinical providers and pest control companies with essential services certificate will have access to the Estate.
Oasis menu will be reduced toalimited menu as take away and delivery options.
All construction sites will be closed from Thursday 24th September.
We will maintain basic estate management services such as waste collection, generator and security.
The Golf Course, Spa, tennis courts and kid’s playroom will be closed.
The Country Club, Gym (maximum 8 person) and swimming pool will remain opened.
Country Store will remain opened.
We will postpone all Estate events.
Crisis Command Centre will be set-up in the Estate Management office.
*please find the infographic on the last page with clear information on facilities and services
Please note: Pun Hlaing Estate Services
Our Estate employees will be reduced toaminimum service level and living in the estate. We will be providing them with food and lodging for the time being in order for us to continue to provide essential services within the Estate.
We will maintainareduced level of housekeeping service, but residential landscaping services will stop as we will not haveasufficient amount of staff to run the service.
All persons’ household staff, company employees and residents are to follow strictly the precautions below:
Good hygiene practice – handwashing, hand sanitiser and safe coughing / sneezing should be made at all time.
Strict social distancing when possible
Have to follow 100% mandatory facemask wearing within the Estate when strict social distancing of6feet is not possible
WHO advises on the link below for good practices and how to do in case of infection or to prevent infection: https://bit.ly/3bceOVh
Should you require any assistance we have our contact line at 1461 (from landlines within the Estate) or 09955400911.
Should you require any medical information, contact Pun Hlaing Siloam Hospital hotline at 013684323.
We must stress that the there is no need to panic – our preparations are intended to allow us to respond promptly, inatransparent manner, in the event of further escalation in the situation.
စက်တင်ဘာလ ၂၀ ရက်နေ့တွင် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအနေနှင့် Covid-19 နှင့်ပတ်သက်သည့် ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို တိုးမြှင့်လိုက်သည့် ကြေညာချက်ကို အားလုံးသိရှိပြီးဖြစ်မယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။ ၎င်းကြေညာချက်နှင့်အညီ ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကိုလည်း အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည့် အနီရောင်အဆင့်သို့ တိုးမြှင့်လိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်း အသိပေးပြောကြားလိုပါတယ်။
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရနှင့် ကျွန်ုပ်တို့၏ Covid Command Center ရဲ့ လမ်းညွှန်မှုနှင့်အညီ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအား အကောင်းဆုံးကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုပေးနိုင်ရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါလုပ်ဆောင်ချက်များကို ပြုလုပ်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ ထိုလုပ်ဆောင်ချက်များသည် စက်တင်ဘာလ ၂၂ ရက်၊ အင်္ဂါနေ့၊ မနက် ၈ နာရီမှ စတင်၍ သက်ရောက်မည်ဖြစ်ပါသည်။
အစိုးရမှ မိမိအိမ်တွင်သာနေထိုင်ရန် ညွှန်ကြားချက်
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းသို့ မည်သည့်ဧည့်သည်မှဝင်ရောက်ခြင်းမပြုရ။ အိမ်ရာဝင်း ပြင်ပတွင်နေထိုင်သော Club အဖွဲ့ဝင်များလည်း ထိုအချက်တွင် အကျုံးဝင်မှုရှိသည်။
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများသာ အခြေခံလိုအပ်ချက်များအတွက် ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ရှိမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ရာဝင်းပြင်ပတွင်နေထိုင်သော အိမ်အကူများ၊ ကလေးထိန်းများ၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူများကို ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးမည်မဟုတ်သောကြောင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းတွင်သာနေထိုင်နိုင်ရန် စီစဥ်မှုပြုလုပ်ပါ။
ယာဥ်မောင်းများကို အိမ်ရာဝင်းအတွင်းသို့ ဖြတ်သန်းသွားလာခွင့်ပြုမည်မဟုတ်ပါ။ လူကြီးမင်းတို့အနေဖြင့် ယာဥ်မောင်းများအား ပင်မဂိတ်တွင်စောင့်ခိုင်းနိုင်ပါသည်။ (ပန်းလှိုင်အိမ်ရာအနေနှင့် Buggy ဝန်ဆောင်မှုကို ဆက်လက်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး Golf club မှလည်း Buggy ငှားရမ်းမှုကိုပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်)
အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို လုပ်ဆောင်နေသည့် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းများဖြစ်သော အစားအသောက်ပို့ဆောင်သည့်လုပ်ငန်း၊ ဆေးဝါးပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်း နှင့် ပိုးမွှားနှိမ်နင်းရေးလုပ်ငန်းများအနေဖြင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းသို့ အခြေခံလိုအပ်ချက်များဆောင်ရွက်နေသောဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်း ထောက်ခံစာဖြင့် ဝင်ရောက်ခွင့်ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
Oasis မှ ရရှိနိုင်သော menu ကိုလျော့ချမည်ဖြစ်ပြီး ဆိုင်တွင် ကိုယ်တိုင်လာရောက်ဝယ်ယူနိုင်သလို အိမ်အရောက်ပို့ဆောင်ပေးမည့် ဝန်ဆောင်မှုကိုလည်း ရရှိမည်ဖြစ်သည်။
ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းခွင်များအားလုံးကို စက်တင်ဘာလ ၂၄ ရက်နေ့မှစတင်၍ ရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်သည်။
ပန်းလှိုင်အိမ်ရာအတွင်းရှိ အခြေခံဝန်ဆောင်မှုများဖြစ်သော - စွန့်ပစ်ပစ္စည်း သိမ်းဆည်းမှု၊ လျှပ်စစ်ဝန်ဆောင်မှု၊ အစားအသောက် ပို့ဆောင်ပေးမှု၊ လုံခြုံရေး အစရှိသည်တို့ကို ဆက်လက်ထိန်းသိမ်း လုပ်ဆောင်သွားမည် ဖြစ်သည်။
ဂေါက်ကလပ်၊ spa၊ တင်းနစ်ကွင်းများနှင့် kid’s playroom ကိုပိတ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
Country Club, Gym (အများဆုံး လူ၈ဦးသာ) နှင့် ရေကူးကန်တို့ကို ဆက်လက်ဖွင့်လှစ်ထားမည်ဖြစ်သည်။
Country Store ကို ပုံမှန်အတိုင်းဆက်လက်ဖွင့်လှစ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုရုံးတွင် Crisis Command Centre ကို ထားရှိမည်ဖြစ်သည်။
*ရရှိနိုင်မည့် ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် အသုံးပြုနိုင်မည့် နေရာများကို စာမျက်နှာအောက်ဆုံးတွင် ပိုမိုရှင်းလင်းသောနားလည်မှုရရှိစေရန် ဖော်ပြပေးထားပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ပန်းလှိုင်အိမ်ရာဝန်ထမ်းများကို အနည်းဆုံးဝန်ဆောင်မှုအထိလျော့ချမည်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေနှင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းအခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ဆက်လက်ပေးဆောင်နိုင်ရေးအတွက် ဝန်ထမ်းများကို ယာယီနေရာထိုင်ခင်းနှင့် အစားအသောက်များ ထောက်ပံ့မှုပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်သန့်ရှင်းရေးဝန်ဆောင်မှုကို လျော့ချထားသော လူအင်အားဖြင့် ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းလုပ်ဆောင်သွားမည်ဖြစ်သော်လည်း လူနေအိမ်များအတွက် ပန်းမန်ထိန်းသိမ်းပြုပြင်ခြင်းဝန်ဆောင်မှုကို လုံလောက်သောဝန်ထမ်းအင်အားမရှိသောကြောင့် ယာယီရပ်ဆိုင်းထားမည်ဖြစ်သည်။
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများ၏ ဝန်ထမ်းများ၊ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းများနှင့် အိမ်ရာဝင်းအတွင်းနေထိုင်သူများအနေနှင့် အောက်ဖော်ပြပါ ကြိုတင်ကာကွယ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်များကို တင်းကျပ်စွာလိုက်နာဆောင်ရွက်ခြင်းပြုရမည်ဖြစ်သည်။
လက်ဆေးခြင်း၊ လက်ဆေးရည်အသုံးပြုခြင်း၊ ချောင်းဆိုးနှာချေလျှင် အုပ်၍ဆိုးခြင်း အစရှိသည့် ကောင်းမွန်မှန်ကန်သော ကျန်းမာရေး လုပ်ဆောင်မှုများကို လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
တဦးနှင့်တဦးခပ်ခွာခွာနေထိုင်ခြင်းကို အတတ်နိုင်ဆုံး လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည်။
အိမ်ရာဝင်းအတွင်းတွင် ၆ပေအကွာတွင် ခပ်ခွာခွာနေရသော အခြေအနေများမပြုလုပ်နိုင်ပါက နှာခေါင်းစည်းကို အချိန်ပြည့် ဝတ်ဆင်ထားရမည် ဖြစ်ပါသည်။
ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံရလျှင်သော်လည်းကောင်း၊ ရောဂါပိုးကို ကြိုတင်ကာကွယ်ချင်လျှင်သော်လည်းကောင်း အောက်ပါလင့်ခ်တွင် ဖော်ပြထားသော ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အဖွဲ့၏ လမ်းညွှန်ချက်များအတိုင်း ပြုမူဆောင်ရွက်ကြရန် အကြံပြုအပ်ပါသည်။ https://bit.ly/3bceOVh
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် အကူအညီ တစ်စုံတစ်ရာ လိုအပ်ပါက ကျွန်ုပ်တို့၏ အိမ်ရာဝင်းအတွင်းရှိ ဖုန်းလိုင်းဖြစ်သော ၁၄၆၁ သို့လည်းကောင်း ၀၉၉၅၅၄၀၀၉၁၁ သို့လည်းကောင်း ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။
လူကြီးမင်းအနေဖြင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ သတင်းအချက်အလက်များကို သိရှိလိုပါက ပန်းလှိုင်စီလုံဆေးရုံ၏ အရေးပေါ်ဖုန်းလိုင်းဖြစ်သော ၀၁ ၃၆၈၄၃၂၃ ကို ခေါ်ဆိုမှု ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်။